I-East Glacier Park i-Whispering Pine Cabin yokurenta. - I-Airbnb
I-East Glacier Park i-Whispering Pine Cabin yokurenta.
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguLona
Eli khaya lisanda kwakhiwa lineebhedi ezimbini zookumkanikazi kumagumbi ahlukeneyo. Inekhitshi eligcweleyo, iwasha kunye nesomisi, amagumbi okuhlambela amabini (ibhafu ephezulu, ishawari ephantsi). I-intanethi kunye ne-tv ibonelelwe kwaye igobe i-sofa engumandlalo wendlovukazi eyenziwe nge-foam yememori (i-brand ye-Leather yaseMelika) ekhululekile kakhulu kubantu ababini abongezelelweyo, evumela abantu abathandathu ukuba bahlale bekhululekile. Ukongeza, ukuba kukho imfuneko yebhedi umntu unokubonelelwa ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo.
Indawo ikumgama wokuhamba we-East Glacier Lodge, iindawo zokutyela kunye nebala legalufa. Unokufikelela kuhambo lokuhamba ngeentsuku kwiLake Medicine ezimbini iikhilomitha ezilishumi elinambini kude nemibono emangalisayo eya kuthatha umoya wakho okanye uhambe ujikeleze iLali yeGlacier Park!
Uya kuba neendawo zokutyela ezininzi, iivenkile kunye neevenkile ezahlukeneyo onokuthi uzisebenzise. Ukufikelela kwakho epakini kumgama oziikhilomitha ezilishumi elinambini ngobuhle obupheleleyo ukuze amehlo akho atye kwaye umphefumlo wakho ufunxe! Njengoko sisithi, "Amayeza amabini liyeza elilungileyo" kwaye ukwiimayile ezilishumi elinambini ukusuka kwiLake Medicine kunye neContinental Divide Trail (CDT). Ukufikelela kwi-CDT trail ineenxalenye ezenza uhambo olumangalisayo lwemini kwiNtlambo yeMidiza emibini!
Umbuki zindwendwe ngu- Lona
Kuyo nayiphi na imibuzo okanye iingcebiso njengomamkeli-ndwendwe ndiya kuba secaleni kwam. Ndiyavuya ukunceda nangayiphi na indlela ukwenza ukuhlala kwakho kube yinto yokukhumbula!